Zimbabwe may raise blend rate to 15%, Green Fuel to profit? : Biofuels Digest
Zimbabwe may raise blend rate to 15%, Green Fuel to profit?
In Zimbabwe, Green Fuel may help to fund the country’s 2013-2014 agricultural season, with the government increasing the mandatory ethanol blend rate from 5% to 15% in turn. The company currently has a monopoly on ethanol production, so the increase could result in huge profits for the company. Zimbabwe has already announced a more than $800 million package for the agricultural season, comprised of loans, government contributions, and private contributions from the seed and fertilizer industries.
Tags: E15, Green Fuel, Zimbabwe
« UCLA breakthrough could increase yields by 50%
agriKomp moves to new headquarters in Stoneleigh »